မလိုခငျြပါပဲ အတပျခံခဲ့ရတဲ့ခေါငျးစဉျတှေ - Tameelay
March 16, 2020 Tameelay Tameelay Knowledge 0
မလိုပဲ ရလာတဲ့ အရာတှထေဲမှာ မိဘမဲ့ဆိုတဲ့ ခေါငျးစဉျက ထိပျဆုံးက ပါတယျ
အရငျဘဝက ကုသိုလျကံ နညျးခဲ့ဖူးလို့ပဲ နမှောပါဆိုပွီး ဘယျလိုပဲ ဖွသေိမျ့ ဖွသေိမျ့ အဖကေော အမကေောလို့ မေးလာတဲ့အခါ ပွောစရာစကားတှေ မရှိတော့အထိ ဝမျးနညျးပွီး တိတျဆိတျသှားခဲ့ရဖူးတယျ ။ ကြောငျးတကျရတဲ့ရကျတှဟော အခကျခဲဆုံး ရကျတှပေဲပေါ့ ။
တဈပါးသူတှေ မိဘကို လကျတှဲပွီး ကြောငျးတကျခြိနျ ကြောငျးဆငျးခြိနျတိုငျးမှာ ကိုယျ ဘယျလကျကိုဆှဲရမလဲလို့ တှေးခဲ့ဖူးတယျ ။
မလိုခငျြပဲ ရလာခဲ့တဲ့ ခေါငျးစဉျပါ ကိုယျကိုယျတိုငျ ဘာမှ မတတျနိုငျခဲ့ဘူး ။
လိုသုံးတဲ့ ဒီခေါငျးစဉျကိုလဲ ကြှနျတျော မလိုခငျြဆုံးပဲ ။
ကိုယျ့ဘကျက စတေနာတှေ စဈမှနျပါရဲ့နဲ့ တဈဖကျမှာကြ လိုအပျတဲ့အခါမှသာ သတိတရရှိနတေတျတာကို ရငျထုမနာဖွဈတယျ ။
ကိုယျအလေးထားသလို ပွနျပွီး အလေးထားစခေငျြတာလဲ ကိုယျ့ဆန်ဒပါ ဒါပမေယျ့ ဘယျတော့မှ ဘောငျမဝငျပါဘူး ။
ရိုးသားမှုတှေ ဖွူစငျမှုတှကေ သူတို့ခနြငျးစရာသကျသကျလေ ။ တဈဖကျကို ပွနျပွီး နားလညျပေးဖို့ အတှေးလေး နဲနဲလေးတောငျ မရှိဘူး ။
လိုအပျနတေုနျးမှာ ပွုံးပွနှုတျဆကျပွီး အဆငျမပွတျ ဖုနျးဆကျဖို့ ဝနျမလေးတတျသလို မလိုအပျတော့တဲ့အခါ ခြောငျထိုးပဈဖို့ ဝနျမလေးတတျကွတဲ့ စိတျဓာတျတှကေို တကယျကို အံ့သွပါတယျ သို့သျော လိုသုံးဆိုတဲ့ ခေါငျးစဉျအောကျမှာ နသေားတကတြော့ ရှိလာပါပွီ အရငျလို ခဏခဏ ဝမျးမနညျးဖွဈတော့ဘူး ။
အဖွညျ့ခံ ဆိုတဲ့ စကားလုံးပေါ့ ကြှနျတျော မနှဈမွို့ဆုံးထဲမှာ သူလဲ ပါတယျ ။
ဖဲထုပျကွားထဲက Jokerတဈခပျြ လိုပေါ့ နှဈသကျလှနျးလို့ လကျထဲမှာ ကိုငျထားတာမြိုးမဟုတျပဲ ဘယျနရောထိုးထိုးရတဲ့ဆိုတဲ့ စိတျနဲ့ ကိုငျထားတဲ့အဖွဈမြိုးတှလေေ ။
အဖွညျ့ခံ . . . လိုအပျတဲ့ ကှကျလပျတိုငျးမှာ နှလုံးသားမဲ့နတေဲ့ လူတဈယောကျလို လိုကျပွီးဖွညျ့ပေးနရေတာတှလေဲ မလိုခငျြတော့ပါဘူး ။
စတေနာထားတယျ မတ်ေတာထားတယျ ဒါပမေယျ့ ခဏ အသုံးတျော ခံရတာမြိုးပဲလေ ။ တဈသကျတာ ဆိုပွီး အခြိနျအကွာကွီး မြှျောလငျ့နခှေငျ့မှ မရှိခဲ့တာ ။
ငိုနတေုနျးမှာ ပြှျောအောငျ လုပျပေးရတဲ့ ဂြိုကာ နာကငျြနတေုနျးမှာ ဆေးထညျ့ပေးရတဲ့ ဒေါကျတာ စိတျဓာတျကတြုနျးမှာ အားပေးစကားတှေ ပွောပေးတတျတဲ့ အညတရပေါ့ အဖွညျ့ခံ တဲ့ ဒီခေါငျးစဉျအောကျမှာ အမှနျတကယျ ကြှနျတျော မပြျောခဲ့ဘူး ။
ဘဝမှာ . . . မငျးဖွဈခငျြတဲ့အရာကို မငျးကိုယျတိုငျ ဖနျတီးယူခှငျ့ရှိပါတယျဆိုတဲ့ လူတှကေို မေးကွညျ့ခငျြတယျ မလိုခငျြပဲ ရလာတဲ့အရာတှအေတှကျကော အဖွမေရှိဘူးလားလို့။
မကွိုးစားခဲ့တာ မဟုတျဘူး မရိုးသားခဲ့မဟုတျဘူး အတိတျက ကံကိုခညျြး အပွဈတငျ ပုံခနြတောလဲ မဟုတျပါဘူး သို့သျော ဘဝမှာ မလိုခငျြပဲ ရလာတဲ့ ခေါငျးစဉျတှလေဲ ရှိသေးတဲ့အကွောငျး ပွောပွခငျြတယျ ။
မလိုပဲ ရလာတဲ့ အရာတွေထဲမှာ မိဘမဲ့ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်က ထိပ်ဆုံးက ပါတယ်
အရင်ဘ၀က ကုသိုလ်ကံ နည်းခဲ့ဖူးလို့ပဲ နေမှာပါဆိုပြီး ဘယ်လိုပဲ ဖြေသိမ့် ဖြေသိမ့် အဖေကော အမေကောလို့ မေးလာတဲ့အခါ ပြောစရာစကားတွေ မရှိတော့အထိ ၀မ်းနည်းပြီး တိတ်ဆိတ်သွားခဲ့ရဖူးတယ် ။ ကျောင်းတက်ရတဲ့ရက်တွေဟာ အခက်ခဲဆုံး ရက်တွေပဲပေါ့ ။
တစ်ပါးသူတွေ မိဘကို လက်တွဲပြီး ကျောင်းတက်ချိန် ကျောင်းဆင်းချိန်တိုင်းမှာ ကိုယ် ဘယ်လက်ကိုဆွဲရမလဲလို့ တွေးခဲ့ဖူးတယ် ။
မလိုချင်ပဲ ရလာခဲ့တဲ့ ခေါင်းစဉ်ပါ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ဘာမှ မတတ်နိုင်ခဲ့ဘူး ။
လိုသုံးတဲ့ ဒီခေါင်းစဉ်ကိုလဲ ကျွန်တော် မလိုချင်ဆုံးပဲ ။
ကိုယ့်ဘက်က စေတနာတွေ စစ်မှန်ပါရဲ့နဲ့ တစ်ဖက်မှာကျ လိုအပ်တဲ့အခါမှသာ သတိတရရှိနေတတ်တာကို ရင်ထုမနာဖြစ်တယ် ။
ကိုယ်အလေးထားသလို ပြန်ပြီး အလေးထားစေချင်တာလဲ ကိုယ့်ဆန္ဒပါ ဒါပေမယ့် ဘယ်တော့မှ ဘောင်မ၀င်ပါဘူး ။
ရိုးသားမှုတွေ ဖြူစင်မှုတွေက သူတို့ချနင်းစရာသက်သက်လေ ။ တစ်ဖက်ကို ပြန်ပြီး နားလည်ပေးဖို့ အတွေးလေး နဲနဲလေးတောင် မရှိဘူး ။
လိုအပ်နေတုန်းမှာ ပြုံးပြနှုတ်ဆက်ပြီး အဆင်မပြတ် ဖုန်းဆက်ဖို့ ၀န်မလေးတတ်သလို မလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ချောင်ထိုးပစ်ဖို့ ၀န်မလေးတတ်ကြတဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေကို တကယ်ကို အံ့သြပါတယ် သို့သော် လိုသုံးဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ နေသားတကျတော့ ရှိလာပါပြီ အရင်လို ခဏခဏ ၀မ်းမနည်းဖြစ်တော့ဘူး ။
အဖြည့်ခံ ဆိုတဲ့ စကားလုံးပေါ့ ကျွန်တော် မနှစ်မြို့ဆုံးထဲမှာ သူလဲ ပါတယ် ။
ဖဲထုပ်ကြားထဲက Jokerတစ်ချပ် လိုပေါ့ နှစ်သက်လွန်းလို့ လက်ထဲမှာ ကိုင်ထားတာမျိုးမဟုတ်ပဲ ဘယ်နေရာထိုးထိုးရတဲ့ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ ကိုင်ထားတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေလေ ။
အဖြည့်ခံ . . . လိုအပ်တဲ့ ကွက်လပ်တိုင်းမှာ နှလုံးသားမဲ့နေတဲ့ လူတစ်ယောက်လို လိုက်ပြီးဖြည့်ပေးနေရတာတွေလဲ မလိုချင်တော့ပါဘူး ။
စေတနာထားတယ် မေတ္တာထားတယ် ဒါပေမယ့် ခဏ အသုံးတော် ခံရတာမျိုးပဲလေ ။ တစ်သက်တာ ဆိုပြီး အချိန်အကြာကြီး မျှော်လင့်နေခွင့်မှ မရှိခဲ့တာ ။
ငိုနေတုန်းမှာ ပျှော်အောင် လုပ်ပေးရတဲ့ ဂျိုကာ နာကျင်နေတုန်းမှာ ဆေးထည့်ပေးရတဲ့ ဒေါက်တာ စိတ်ဓာတ်ကျတုန်းမှာ အားပေးစကားတွေ ပြောပေးတတ်တဲ့ အညတရပေါ့ အဖြည့်ခံ တဲ့ ဒီခေါင်းစဉ်အောက်မှာ အမှန်တကယ် ကျွန်တော် မပျော်ခဲ့ဘူး ။
ဘ၀မှာ . . . မင်းဖြစ်ချင်တဲ့အရာကို မင်းကိုယ်တိုင် ဖန်တီးယူခွင့်ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ လူတွေကို မေးကြည့်ချင်တယ် မလိုချင်ပဲ ရလာတဲ့အရာတွေအတွက်ကော အဖြေမရှိဘူးလားလို့။
မကြိုးစားခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး မရိုးသားခဲ့မဟုတ်ဘူး အတိတ်က ကံကိုချည်း အပြစ်တင် ပုံချနေတာလဲ မဟုတ်ပါဘူး သို့သော် ဘ၀မှာ မလိုချင်ပဲ ရလာတဲ့ ခေါင်းစဉ်တွေလဲ ရှိသေးတဲ့အကြောင်း ပြောပြချင်တယ် ။
စကားများခြင်းက အမှားများစေပါတယ်၊ များများနားထောင်ပြီး နည်းနည်းပဲပြောပါ